Global Voices teny Malagasy » Niditra Tao Amin’ny Media Sosialy Hisian’ny Fanohanana Manerantany Ny Hetsika ‘Afaho i Papoazia Andrefana’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Avrily 2016 4:44 GMT 1	 · Mpanoratra Dalia Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Indonezia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ny hetsika ‘Afaho Papoazia Andrefana’ dia mangataka  amin'ny mpiserasera handefa sary manohana ny diezy #LetWestPapuaVote.
Faritanin'i Indonezia i Papoazia Andrefana ankehitriny, saingy misy ny hetsika ao anatiny sy ivelan'ny  firenena mitaky ny fametrahana ny fahaleovantenany. Ny hetsika ao amin'ny media sosialy mampiroborobo ny diezy #LetWestPapuaVote dia mikendry ny hahazo fanohanana ara-potoana avy amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena amin'ny fivorian'ny Parlemantera Iraisam-pirenena ho an'i Papoazia Andrefana (IPWP) ao amin'ny Antenimieram-pirenen'i Angletera amin'ny 3 May.
Nanafika an'i Papoazia Andrefana avy eo ny miaramila Indoneziana. Tamin'ny 1969, natao ny latsa-batom-bahoaka izay solontena 1 000 nofantenin'ny miaramila Indoneziana no nanapa-kevitra fa hijanona ho anisan'ny faritanin'i Indonezia i Papoazia. Nantsoina  hoe ‘Lalànan'ny Safidy Malalaka’ izany na nolazain'ny Papoàna nasionalista ho “Lalànan'ny Tsy Nisy Safidy’ aza.
Voampanga ho manao fihoaram-pahefana maty paika amin'i Papoazia Andrefana i Indonezia. Misy ny tatitra momba ny fandefasana miaramila mafonja hifehy ny faritra izay niteraka fanitsakitsahana mahery vaika ny zon'olombelona. Mandritra izany fotoana izany, noraisina  ho vondrona mpampihorohoro ny hetsika fahaleovantena. Hentitra dia hentitra ny fanarahamaso ny fandrakofam-baovao momba an'i Papozia Andrefana hany ka vitsy ny vaovao  mikasika ny tena zava-misy momba ny olona ao amin'ny faritany. Iray amin'ireo faritany manana harena voajanahary ao Indonezia i Papozia Andrefana, na dia manana taha avo amin'ny fahantrana aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/06/81117/
 mikendry : https://www.facebook.com/FreeWestPapuaCampaignAustralia/?fref=ts
 Mpahay lalàna : http://www.ilwp.nl/language/en/
 parlemantera : http://ipwp.org/